I-Archer fish, intlanzi yokuqala yokuhlasela ikude | Ngeentlanzi
Ezinye iintlanzi zithiywe ngobume bazo, ezinye zibekwe kwindawo ezihlala kuyo kunye nezinye, njengakule meko, ngendlela ezizingela ngayo. Namhlanje siza kuthetha intlanzi etoli. Yeyazo zonke iintlobo zetyhefu kwaye kukho iindidi ezisixhenxe phakathi kwazo esizibonayo ii-toxotes jaculatrix, toxotex chatareus, okanye ii-toxotes blythii. Indlela yabo ekhethekileyo yokuzingela yachazwa ngo-1767 sisazinzulu esigama linguPallas.
Kule nqaku siza kuchaza iintlobo zeentlanzi Ityhefu jaculatrix. Ngaba uyafuna ukwazi yonke into malunga nale ntlanzi kunye nendlela yayo yokuphila?
2 Indawo yokuhlala kunye nendawo yokuhambisa
3 Ukuziphatha kwee-toxotes jaculatrix
4 Ukutya kwe-Archerfish
5 Indlela yokuzingela
Igama eliqhelekileyo, intlanzi yomtoli, libhekisela kumtoli weentsomi uSagittarius. Linikwe eli gama ngendlela yalo ekhethekileyo yokuzingela esiza kuyibona kamva. Inentandokazi njengentlanzi ye-aquarium, kodwa kunzima ukuyinyamekela. Luhlobo olusebenza njengomceli mngeni kubo bonke abanamava amahle ngeendawo zasemanzini.
Umzimba wakhe ubunzulu kakhulu kwaye intloko yakhe ithambile. I-muzzle imile okwe-V kwaye inamanqaku athile. Amehlo ayo makhulu kwaye anakho ukulungelelanisa umbono onika amandla okubona xa kukho ixhoba kuyo. Ngale ndlela unokuphendula ngexesha kwaye umbethe.
Xa le ntlanzi ikwi-aquariums, ihlala ifikelela kubude beesentimitha ezili-15. Edlelweni Ubude obufikelela kwi-30 cm buye barekhodwa. Uninzi lunombala oqaqambileyo wesilivere okanye nangaphezulu kwicala elimhlophe elinamaqela amnyama athe nkqo.
Ngaphandle kweebhendi ezimnyama, zinombala wegolide obaleka ujikeleze umqolo wabo. Iibhanti zithatha imilo engunxantathu xa ziphakathi kwentlanzi emacaleni. Ngaphantsi komzimba wakhe akanamanqaku. Imiphetho yangaphandle ye-anal kunye ne-dorsal fin imnyama. Ukulindela ubomi bakho kwi imeko elungileyo ifikelela kwiminyaka elishumi.
Iimpawu ezincinci zibonwa ngamehlo njengoko zinamabala amthubi angaqhelekanga. Banomzimba ocabaleleyo kwaye omde ngakumbi onentloko ethe kratya.
Indawo yokuhlala kunye nendawo yokuhambisa
I-archer fish luhlobo lweentlanzi zetyuwa kwaye zinokufumaneka kwi I-Asia yeTropiki neAustralia, ikakhulu. Iindawo apho kukho intabalala zisezidolophini ezinje ngePapua, iNew Guinea kunye nomantla eOstreliya. Indawo ezihlala kuyo ziimangrove ezinetyiwa apho zichitha ixesha zinqumla iingqaqa zikhangela ukutya. Ezindala zizidalwa ezizodwa eziya kwiingqaqa zekorale, ngelixa ezona zincinci zihamba ziye emilanjeni nasemilanjeni.
Zikhula kumachweba kunye namanzi anetyuwa phakathi kwemangrove. Bayakwazi ukufudukela emanzini amatsha ngokunjalo kwimeko yokunqongophala kokutya.
Ukuyigcina kwi-aquarium, akukho ngaphezulu kweelitha ezingama-500 eziyimfuneko. Nangona kunjalo yi- iintlanzi ezizimeleyo kwaye nokuba noburhalarhume Kuyacetyiswa ukuba nayo ngeentlanzi zohlobo olufanayo losapho lwe-toxote kuba zifuna iiparameter ezifanayo.
I-Archerfish ivela kwiindawo apho ityuwa, ubunzima kunye ne-pH ziyahluka ngalo lonke usuku ngenxa yolwandle. Ke ngoko amanzi kufuneka abenzima kakhulu kunye ne-PH ihamba phezulu nge-8º. Ungaze uyigcine emanzini athambileyo. Ixhasa ubushushu obuphezulu kakuhle. Gcina phakathi kwama-24 nama-28ºC.
Ukuba luhlobo lokuqubha kakhulu kufuneka siqiniseke ukuba sishiya indawo eyoneleyo. Icebo lokucoca ulwelo kufuneka libe ngaphezulu kwe kuphephe ammonia yityhefu esiba yityhefu ngakumbi njengoko ubunzima kunye ne-PH yamanzi isonyuka. Kubalulekile ukuba neemeko ezifanayo zasemanzini kwindawo yazo yokuhlala ukuthintela izifo nosulelo.
Ukuziphatha kwe Ityhefu jaculatrix
Ukuze baphile ngokufanelekileyo, kufuneka okungenani kubekho iisampulu ezine kwi-aquarium. Banokuba ndlongondlongo kwiintlanzi zeklasi enye ukuba zinobungakanani obahlukeneyo. Eyona ndlela yokuyiphepha le meko kukuthenga zonke iintlanzi ezilinganayo.
Amanzi e-aquarium kufuneka abile. Kuyacetyiswa ukuba ungabazisi nezinye iintlobo zentlanzi ezinokhuphiswano ngakumbi okanye zommandla, kuba oko kungadala umonakalo. Ezinye iintlanzi ezinobumdaka ezinje ngeeNtlanzi ezinkulu zamehlo, iiMudskippers okanye iiMollys zinokwenza amaqabane amahle etanki, njengeeMfene, iiScats, kunye neePuffs.
Ukutya kwe-archerfish ikakhulu kukutya. Ngokuqhelekileyo batya izinambuzane kunye nezigcawu ezikwaziyo ukuzingela phezu kwamanzi. Siza kubona indlela ekhethekileyo yokuzingela kwicandelo elilandelayo. Inokutya nezinye iintlanzi ezincinci kunye nee-crustaceans.
Ukuba olu hlobo lukhathalelwe ekuthinjweni kwi-aquarium, baya kukhetha zihlala izilwanyana ezingenamqolo, izinambuzane ezincinci eziphilayo kunye neentlanzi ezincinci.
Ukusukela ngoku siqalisile ukuchaza iintlanzi ezitola ngetoli, sibonisile ukuba inendlela eyodwa yokuzingela. Yindlela le ntlanzi ephuhlise ngayo ukuzingela. Kwaye kunjalo Iyakwazi ukudubula i-jet yamanzi oxinzelelekileyo kwixhoba layo nge-groove eluphahleni lwemilomo yabo. Ijethi yamanzi iphuma ngamandla amakhulu. Iyakwazi ukubetha izinambuzane kunye nezigcawu ezihleli kumasebe asezantsi kufutshane namanzi. Nje ukuba bawele phezu kwamanzi, batyiwa ngokukhawuleza.
Kubonakala ngathi umtoli weentlanzi, kule minyaka idlulileyo, ufundile ukwazi ngqo apho ixhoba liza kuwela khona. Zikhawuleze kakhulu xa zisiza ekutyeni ixhoba lazo.
Ukudubula i-jet yamanzi, kufuneka uphakamise ulwimi lwakho kuphahla lomlomo wakho. Ngale ndlela ungayilungisa ijet ibe yityhubhu kwaye ikhava ivala ngokukhawuleza ukuyinika amandla. Uninzi lwentlanzi Bayakwazi ukudubula ukuya kumgama weemitha eziyi-1,5. Ezinye iisampulu zasendle, ezinobude obukhulu, ziye zabonwa ziqala ukuya kuthi ga kwiimitha ezi-3 kude.
Xa ixhoba lityhutyhile phantsi, i-archer ibhukuda ngesantya esiphezulu ukuya kwindawo yokufika. Bafikelela kumaxhoba abo nje i-millisecond ezili-100. Kwintlanzi yomtoli kukho ezinye izifundo ezenziweyo kunye nokudubula okuhle. Amakhulu eentlanzi aye ahlalutywa kwaye kwagqitywa kwelokuba banokuqeqeshwa ukubetha izinto ezihambayo. Ukukwazi ukubetha iithagethi ezihambayo kukuziphatha okucothayo.
Kunzima ukwahlula isini phakathi kwendoda nebhinqa. Ukuzaliswa kwayo ekuthinjweni kunzima kakhulu. Kuyimfuneko ukuba nabo babe ngamaqela amakhulu kakhulu ukuba ufuna ukuzala. Akukho ndlela yokubanyanzela ukuba bavelise kwakhona, kodwa kuya kufuneka uyenze yodwa. Kude kube namhlanje, baphinde bavelisa kwakhona amaxesha ambalwa kwi-aquariums nangengozi.
Xa umntu obhinqileyo echumiswa phantse amaqanda ayi-3.000 ayakhululwa kwaye ahlala edada ukufumana amathuba angcono okuqandusela. Xa oku kusenzeka, kuyacetyiswa ukuba uwahambise kwenye itanki de amaqanda aqandusele. Zithatha kuphela iiyure ezili-12. Ifry itya izinambuzane kunye nokutya kweflake okujikelezayo. Kungcono ungabaniki ukutya okungaphiliyo, ukuze bangakuqheli xa sele bekhulile.
Le ntlanzi idume kakhulu kwaye kunzima ukuyinyamekela, kodwa ukuba uyingcali ye-aquarium, ngumceli mngeni omkhulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Intlanzi » Intlanzi yokuloba